Shiinaha Sanduuqa Baakadaha Tayada Tayada Raaxada leh ee khamriga casaanka ah ee lagu dhejiyo soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha Blue EVA | Raymin
Warshadaha Codsiga: Khamriga
Waxyaabaha: 157gsm warqad dahaarka leh + 1500gsm sabuurad
Feature: waara, Tayo Sare
Cabir: 30 x 15 x 6cm
Midabka: Muuqaalka midabka Daabac
Dhameystirka Dusha: Sawirka UV, Matte ama Laydh dhalaalaya, Shaabbad Shaabad, Kordhinta, Debossing, Dahab ama Lacag kulul oo lagu shaabadeeyo
Waqti Muunad: 2-5 maalmood
Kharashka Tusaalaha: 50 $, waa la soo celin karaa ka dib markii amarka badan la xaqiijiyay
Bixinta Sample: UPS, Fedex, DHL
Dalbashada waqtiga dirista: 15-18 maalmood, waxay kuxirantahay tirada
Shuruudaha Bixinta: T / T, L / C (amar badan), Western Union, Paypal
Waa muhiim in la doorto qaabka sanduuqa oo muuqaal ahaan soo jiidasho leh oo shaqeynaya. Waxaa jira qaabab sanduuqyo kala duwan oo lagu bixiyo Raymin Display.
Xiritaanka Magnetic: Sanduuqyada xiritaanka magnetic-ka waxaa lagu sameeyaa hal gabal. Sanduuqyadan waxaa lagu sameeyay iyada oo la isticmaalayo loox cawlan oo tayo sare leh. Sanduuqyadan waxaa badanaa lagu sameeyaa qaab cubey iyo leydi ah waxayna qaadi karaan dhowr shey.
Daboolka Qaadista: Sanduuqan waxaa laga sameeyay sabuuradda. Sanduuqyada daboolka wiishka ayaa laga sameeyaa laba qaybood oo kala duwan oo is dulfuula. In kasta oo qaabka daboolka wiishka looga baxo uu aad u badan yahay laakiin waxa kadhigan mid gaar ah waa xaqiiqda ah inuu hanan karo tiro shay ah waxaana loo qaabeyn karaa qaabab iyo cabir kala duwan.
Sanduuqa Qaabka Buugga: sanduuqa qaabka buugga waxaa loo sameeyay qaab buug ah. Qaabkani wuxuu alaabta ka ilaaliyaa inuu siibto. Qaabka sanduuqa buugaagta waxaa badanaa loo isticmaalaa sidii sanduuqa bandhig maadaama uu ku soo bandhigayo wax soo saar qaab jaceyl ah.
Sanduuqa la isku daadin karo: Sanduuqyada adag ee la isku dumi karo waxaa laga sameeyay sabuuradda cawlan. Tani badanaa waxay leedahay mid magnetic ama ribbon ah. Qaabka, qaabka, qiimaha wax ku ool ah, iyo keydinta tayada awooda ayaa ah waxa ka dhigaya mid ku habboon hadiyado.
Sanduuqa Daboolka Flip: Sanduuqyada daboolka ayaa aad u badan laakiin suumanka, suumanka iyo birlabadaha ku lifaaqan sanduuqan afar geeslaha ah ayaa bixiya muuqaal muuqaal ah.
Box Slide Style: Qaabkan waxaa laga sameeyaa sabuuradda. Sanduuqyada qaabka slide-ku waa sida khaanadaha. Waxay ku habboon yihiin alaabooyinka jilicsan oo si fudud loo jabin karo. Qaabka 'slide style' wuxuu ku siinayaa sheyga xaddiga saxda ah ee awoodda oo ay weheliso difaac adag oo ka imanaya nooc kasta oo dhaawac ah.
Sanduuqa Garbaha Garabka: Sanduuqyada garabka adag ee qoorta ayaa caan ku ah sababtoo ah shaqadooda sare. Sanduuqa wuxuu ka kooban yahay laba qaybood mid waa sanduuqa kan kalena waa daboolka. Daboolka ayaa loo qaabeeyey inuu ka qoto dheer yahay sanduuqa laftiisa. Sanduuqani wuxuu siinayaa difaac ugu badan badeecada.
Sanduuqa Wareegsan ee Wareega ah: Sanduuqyada wareegsan ee qaabeeya waxay alaabtaada siinayaan taabasho raaxo dheeraad ah. Sanduuqyadan ayaa ka kooban laba qaybood mid waa sanduuqa qaabeeya qaabkiisa, halka kan kalena uu yahay daboolka.
Daboolka Qaybta: Sanduuqa daboolka qayb ahaan wuxuu la mid yahay qaabka sanduuqa daboolka-daboolka ah, si kastaba ha noqotee, ujeeddada ugu weyn ee sanduuqan u adeegtaa waxay tahay in alaabtaada lagu soo bandhigo suuqa. Sanduuqyada daboolka qayb ahaan waxay leeyihiin daaqad hufan oo daboolkooda ka dhigaysa alaabta u muuqata macaamiisha. Waxaad ka dooran kartaa sanduuq ku habboon sida ugu fiican badeecadaada ama waxaad qaabeyn kartaa qaab naftaada koox khabiir ah. Iyada oo la kaashanayo naqshadeeyaasheena hibada leh ee hal abuurka leh iyo tikniyoolajiyadeena casriga ah waxaan soo saari karnaa sanduuqyo adag oo qaabeysan oo qaab kasta, naqshad iyo qaabba leh. Muuqaalka Raymin wuxuu bixiyaa 10-28pt oo dhumuc ah sanduuqyada.
Hore: Dabool tayo sare leh iyo sanduuqa warqadda adag ee Style
Xiga: Qalabka sanduuqa xiritaanka Ribbon qufulka ee dharka timaha oo lagu dhejiyay maro xariir ah
Ribbon qufulka xirmada sanduuqa hadiyad ee timaha dre ...